Ubani othole inhlanzi enkulu – abaphumelele emncintiswaneni wekhomishini kaZondo yakwa-Scrolla.Africa | Scrolla Izindaba
Ubani othole inhlanzi enkulu – abaphumelele emncintiswaneni wekhomishini kaZondo yakwa-Scrolla.Africa
Isikhathi esiningi uzothola uPalesa ethe njo ocingweni lwakhe – ehlola ukuthi yiziphi ezihamba phambili kanye nokuthi kwenzakalani emhlabeni wezindaba zamanje.
UPalesa Motanyane oneminyaka engama-27 wase-Ennerdale eNingizimu neGoli uthi, uyajabula ukuthi uthole umthombo wezindaba zakwa-Scrolla.Africa.
UPalesa uwine lo mncintiswano ngoLwesine, ngokuqagela kahle ukuthi uAce Magashule uzoba yiNhlanzi Enkulu elandelayo ezotholakala inamacala obugebengu bokulawulwa kombuso.
“Kwakungeyona into enzima ukuyiqagela, ngesikhathi ngibona umncintiswano wakwa-Scrolla.Africa ngawungenela,” esho. “Ngiyazilandela izindaba zekhomishini [kaZondo]”.
“Kusukela ekuqaleni konyaka bengazi ukuthi izinsuku zikaAce Magashule zibaliwe ngoba abantu abaningi kwikhomishini bebemxhumanisa nemisebenzi yenkohlakalo. Bengazi ukuthi lo nyaka ngeke uphele ngaphambi kokumbona eboshwa.”
UPalesa uthi, umthombo wezindaba zakwa-Scrolla.Africa: “Unginikeza isifiso sokwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni wezindaba kuphinde kunginikeze izindaba ezikhuluma nami nabantu abaningi, abamnyama nabamhlophe beminyaka yonke futhi.”
UPalesa bekungeyena yedwa obecabanga ukuthi uMagashule uzolandela. Kumagama akhethwe ngokungahleliwe alabo abaqagele kahle, bekukhona uGladys Mosia oneminyaka engama-24 waseTembisa othole umklomelo wesibili we-airtime ka-R500 yakwa-MTN.
“Umthombo wezindaba zakwa-Scrolla.Africa ngawuthola kwi-MTN Ayoba App ekuqaleni konyaka,” kusho uGladys.
“Ithimba lakwa-Scrolla.Africa lisigcina sinolwazi lwakamuva nomndeni wami nge-Coronavirus kanye nezinye izindaba ezisematheni emhlabeni jikelele. Ngaphandle kokufunda kwi-MTN Ayoba App, ngiyabalandela emakhasini abo ezinkundleni zokuxhumana.”
Umklomelo wesithathu we-airtime ka-R250 uya kuDoda Buthelezi waseThekwini.
UDoda ucele iqembu lakwa-Scrolla.Africa ukuthi libhale kabanzi ngezemidlalo athanda ukuzifunda uma ehlaba ikhefu ekufundeni ngezepolitiki.
Siyakuzwa Doda. Isifiso sakho sisengenzeka.